'Mr. I-Robot 'Recap, Isiqendu 7: U-Elliot useJele - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa 'Mr. I-Robot 'Recap 2 × 07: I-Orenji yeyona nto intsha
'Mr. I-Robot 'Recap 2 × 07: I-Orenji yeyona nto intsha
URami Malek njengoElliot Alderson.UMichael Parmalee / Inethiwekhi yaseMelika
Ndingathanda ukuba singaphinda sithembane
Izolo phezolo Mnu Robot , eps2.5_h4ndshake.sme, yaphosa ibhombu enengqondo saziva sisiza okwethutyana ngoku , ukutyhilwa ukuba iluphu eyakhiwe ngokugqibeleleyo ka-Elliot yayakhiwe ngokugqibeleleyo kuphela kuba yayilungelelaniswe emva kweentsimbi kwaye kwaqeshwa oonogada besisele sasejele. Loo ntolongo yeparanoia yajika yayintolongo endala nje, kwaye iparanoia yayiyeyomntu olindeleyo Mnu Robot ukungalahli i-mind-fuck kwinkqubo, ngeziqendu ezithathu ezisalele ukuba zihambe.
Ke njengeluphu, eyakhiwe ngokugqibeleleyo okanye hayi, masibuyele umva ekuqaleni.
Ngokufanelekileyo ukusukela esiphelweni sexesha lokuqala, uElliot wavalelwa entolongweni ngenxa yolwaphulo-mthetho… ewe, andinakuqiniseka. Ayisiyo i-5/9 yokuqhekeka, njengoko i-FBI isagqogqa iglobhu ukuyifumana. Ayikokubulawa kukaTyrell Wellick, nokuba, nangona uElliot ebonakala ephethe umpu webhotile kuloo meko, naye. Ke, okwangoku, masicinge ukuba u-Elliot usejele ngexesha awayebile ngalo inja yeesile.
Ababekho ecaweni yeqela lika-Elliot babengamabanjwa anxibe iorenji, njengoko babenjalo abantu abadlulayo kwiindlela zaseNew York ezazinyibilika kwiindlela ezingabolisiyo zebhloko yokubamba, abadlali bebhasikiti baphuma kwintendelezo yentolongo kwaye, ngokungathandabuzekiyo, uHot Carla i-pyromaniac. Umama kaElliot wayengumlindi ongqwabalala, itafile yakhe yegumbi lokutyela yayilicandelo labandwendweli, indawo yokutyela, apho uElliot wayedibana khona noLeon yonke imihla, iholo lokudlela. (Ndi UKUTHANDA uthatha ifilosofi Seinfeld ingxoxo yayiyinyani yeepesenti de ibe ixelelwe ngenye indlela)
Kwaye uRay wayenjalo Uhlobo oluthile loLoyiko uPirate Roberts, kodwa kubonakala ngathi iwebhusayithi yakhe yemakethi emnyama isebenza ngaphakathi kwinkqubo yentolongo, ingene nzulu kangangokuba xa uElliot evula i-FBI (kunye noRay, benogonyamelo kwiveki ephelileyo, bayayamkela?), Uba lutshaba loluntu oluphambili phakathi kwamabanjwa. Okusikhokelela kwincopho yale veki, xa umhlali we-Neo-Nazi (okanye nje abanye bequmbile ii-dudes ezimhlophe ezinenwele ezimhlophe) urhuqa u-Elliot kwindlela ethe chu yokuhambisa okuqhelekileyo, okuphazamisayo Oz Ukuza kwesitayile, de baphazanyiswe yinto engaqhelekanga ninja-esque Leon kunye nesimbo sakhe sokulwa esingafanelekanga sokutyhala le thi le ntolongo ngokoqobo kwi-esile yakho. Oko… yayikukujika, kwanangaphambi kokuba uLeon athethe: Xa ubona i-rose emhlophe, qiniseka ukuba ndikwenzele okuhle, engqina ukuba ukongeza kubuchwephesha bokuhlala kuzo zonke izinto uGeorge Costanza, uLeon uqhagamshelene nabo bonke abantu abathandayo abathandanayo be-cyber-terrorist.
Iziporo ngaphakathi kweziporo zijikajike zijike ngaphakathi, okusibuyisela umva ku… kanye kanye? A jika , ngokuqinisekileyo, kodwa iyamangalisa? Ndiyathetha, ewe, ukufumanisa ukuba besingaphakathi kwintolongo iziqendu ezisixhenxe ayothusi, kodwa kukwakho nezinye inzima Ukubeka imikhondo kuyo yonke loo nto kundikhumbuze phakathi kwexesha lokuqala lonyaka Mnu Robot , apho uChristian Slater waqala ukubonisa khona konke amaxesha afanelekileyo. Ukujija okwanelisayo? Kulapho izinto ziba nzima khona.
Kwaye ndicinga uSam Esmail uyazi lo nto, yiyo loo nto esi siqendu sigqiba kwelizwi-ngaphezulu sifunde kancinci naye kufana nokucela uxolo ngokwenene; ayiloxesha lokuqala uElliot ethetha nathi, kodwa waziva ngathi lixesha lokuqala ukuba asebenzise ngokuthe ngqo ilizwi lomdali wakhe:
Ndiyaxolisa ngokungakuxeleli yonke into. Nceda ungabi ngumsindo ixesha elide. Eli iya kuba lixesha lokugqibela ndigcina izinto kuwe. Ndiyathembisa. Ndiyazi ukuba ucinga ntoni. Kwaye hayi andikuxokisanga. Yonke le nto yenzekile, le yayiyindlela yam yokuhlangabezana nayo. Kodwa ngoku, ndingathanda ukuba singaphinda sithembane.
Yiyo… yonke into efuna ukuthethwa kanye phaya, akunjalo? Ndivakalelwa kukuba iphantse yajika-jika umbono, oziswe liliza langoku lokungaphumeleli koluhlu lweTV emva kokwehluleka kuthotho lweTV, ukuba ukholelwe uEsmail, obhale kwaye walathisa yonke imizuzwana yeli xesha lonyaka, akathembi ukuzinza kwesiqwenga sakhe- jika. Ukugqibelela kweluphu yakhe, ukuba uyafuna.
Mhlawumbi yiyo loo nto ingongoma . Kuyathakazelisa ukuqaphela ukuba oku kuguquka kwentolongo, ukuxolisa iziqendu kunye nako konke, kwafika kwisiqendu apho uElliot noMnu Robot bafikelela kwinqanaba elingabonakaliyo lokuvisisana, isiqendu esaqala noMnu Robot ekhanda intloko ka-Elliot, efana noyise, kunye iphele ngoElliot oxelela uKrista Ngethuba lokuqala, siyathembana. Siyayibona, kweso siphumo sihle senziwe ngexesha lika-Elliot's alleyway beatdown apho atshintsha khona phakathi kwesazisi sakhe ngayo yonke into ayenzayo.
Ke njengokuba u-Elliot efunda ukuthembela kuMnu Robot, kwangaxeshanye sifunda ukuba asinakuthembela Mnu Robot . Yeyona ngxaki iqhelekileyo, i-bullshit ngasemva kokubuliswa kwesandla. Ubini phakathi kwento oyibonayo kunye nento oyifumanayo. Ngamanye amaxesha ufuna ukukhohlisa ukuze ufumane ulawulo, utsho uElliot.
Ngaba kulawula okungakanani oku, le ngcamango, isenayo kuthi? UPortia Doubleday njengo-Angela Moss.UMichael Parmalee / Inethiwekhi yaseMelika
Uyahleka, kodwa bayandihlonipha
Kwenye indawo, amasende amakhulu obhedu abhabha kwigumbi leNdlu kwaye ilizwe sele lingumlilo wenkunkuma.
Sikhawuleza sifunde ukuba kwi-twist ye-future akukho mntu-ngokuqinisekileyo ayinguye uMkhosi oMnyama, kwaye ngokuqinisekileyo ayisiyiyo-FSociety-enenzuzo kwi-5/9 ye-hack efana ne-E-Corp. Uqoqosho lwase-United States lusengxakini kangangokuba ekuphela kwendlela esebenzayo yemali yi-E-Coin, kunye nee-E-Kits- ezifana nokusinda emva kokuhlaselwa kodwa indibaniselwano kunye nobubi –Bhabha besuka ezishelifini.
UAngela utsala inyathelo lokuqinisekisa ukuba eyona nto inkulu ye-E-Corp isonjululwe- kwaye ngaphandle kweqela lesithathu eliphanda ngesityalo esimangalisayo saseKapa saseWashington esabulala umama wakhe, kanye njengokuba uPhilip Price wayefuna – ayisiyiyo kwaphela eyecity yamabali; kukho i-zero ze-FBI ezigcwalise i-wig heists, kunye no-nary utata obhubhileyo obonayo. Ukanti, uPortia Doubleday uthengisa u-Angela njengendadi enamandla okucacayo ukuba usatshona emanzini ngaphezulu kwentloko yakhe. Uyamangalisa ekubonakaliseni ukuphoxeka kuka-Angela kuphela ngamehlo ngenye indlela ebekwe kwindawo yokuma kwelitye.
Ngasemva, usajikeleza, nguDomininique DiPierro, onokuthi athathe u-FSociety ngoku ukuba wayengaxakekanga ekhangela i-4 kaJulayi Party. Hayi indlela ekufaneleke ngayo, nangona kunjalo, ukuba indawo yokungena kukaDiPierro kwilizwe eliyimfihlo elingaphantsi komhlaba labanqolobi ngu-Angela, oyena mntu ungekhoyo okoko waxhuma. Nokuba yintoni le, uDiPierro uthi ku-Angela, ayinguwe.
Ayiyo. Hayi kanye. Ukusukela inkulumbuso u-Angela esimbonileyo ebengumbonisi ozincedayo ngaphambili. Imaski. Inkohliso ayisebenzisileyo ukuzama ukufumana ulawulo.
Andazi ukuba oku kuthetha enye into egqithileyo kunophawu olunzulu lokuntywila, kodwa jonga ezi GIFS zimbini-enye kwesi siqendu, enye isuka U-Elliot no-Darlene abathandayo bhanyabhanya -Kwaye uqaphele ukufana:
Andithengi ukuba iTyrell ufile , ngomntu ngamnye. Khumbula, uJoanna wayenyoba umsebenzi kwindawo yokupaka u-Elliot wavuka, kwaye yena ubuncinci kubonakala ngokungathi uyakholelwa ukuba uTyrell uyaphila. Umntu othile wamtsalela umnxeba kuloo fowuni. Ndiyakholelwa, nangona kunjalo, ukuba uElliot wamdubula. Xa usandula ukukhupha eyona nto inkulu ye-cyber-hack, kwaye usomashishini waseSweden eqala ukubhabha ngokuba ngoothixo, ukhupha umpu kumatshini wepopcorn kwaye umdubule.
Ngale nto ithethwayo: Xa uJoanna eqonde ngqo ekubulaleni umntu ukuba abe neebhola zokummemela kwitheko, esidlangalaleni , ucinga ukuba uyakumnika u-c ukuhlaselwa ngenaliti yokukhubazeka kwezihlunu okanye ayigqibe nje, njengombulali ongenanceba?
Ndiyazi ukuba yi-CEO eneentliziyo ezibandayo yequmrhu elingenanceba elinoxanduva lokusweleka okuninzi kunye nokuwa koqoqosho lwelizwe kodwa ndoda, ngaba umntu angahlala noPhilip Price ngomhla wakhe wokuzalwa?
FUNDA OKULANDELAYO: Mnu Robot Phinda u-2 × 08: 'Yifa, Ufe, iDarlene yam'
Nantsi kutheni i-CNN ihlala idlala kwisikhululo senqwelomoya
'Ingxelo yamatyala olwaphulo-mthetho aseMelika' uJeffrey Toobin kwiNdima kwi-O.J. Uvavanyo lukaSimpson
Ngaba sibona uWalt noJese ku 'Biza ngcono uSawule' okanye hayi?
Ubuxoki obuthathu obuBalaseleyo kuThutho oluPhezulu
mrs maisel zachary levi emangalisayo
Ixesha le-ray donovan 2 isiqendu 1
yenze malini ngejedi yokugqibela
i-uss indianapolis yamadoda anesibindi (2016)
miley cyrus ingoma yokugqibela